ओलम्पिकको पदक तालिकाको शिर्ष स्थानमा अमेरिका ! कुन देशले कति पदक जिते ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
ओलम्पिकको पदक तालिकाको शिर्ष स्थानमा अमेरिका ! कुन देशले कति पदक जिते ?
Posted by Milap Subedi | ३ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०८:४० |
३ भाद्र,काठमाडौ । ब्राजिलमा जारी रियो ओलम्पिकको पदक तालिकाको शिर्ष स्थानमा अमेरिका कायम छ । अमेरिकाले अहिलेसम्म ३३ स्र्वण, ३३ रजत र ३१ कास्य गरी ९७ पदक जितेको छ । दास्रो स्थानमा बेलायत छ । बेलायतको २१ स्वर्ण, २१ रजत र १३ कास्य छ गरी ५५ पदक हात पारेको छ ।
त्यस्तै पदक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको चीनको २० स्वर्ण, १६ रजत र २२ कास्य गरी ५८ पदक छ । जर्मनी पदक तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ । जर्मनीले अहिलेसम्म १३ स्वर्ण, ८ रजत र ११ कास्य गरी ३२ पदक जितेको छ । पाँचौ नम्बर रसिया छ । रसियाले १२ स्वर्ण, १४ रजत र १७ कास्य हात पारेको छ । छैटौं स्थानमा रहेको जापानको १२ स्वर्ण, ६ रजत र १८ कास्य गरी ३६ पदक छ । त्यस्तै सातौं स्थानमा रहेको फ्रान्सको ८ स्वर्ण, ११ रजत र १३ कास्य गरी ३२ पदक छ ।
आठौं स्थानको इटालीको ८ स्वर्ण, ९ रजत, र ६ कास्य गरी २३ पदक छ । नौं स्थानमा रहेको नेदरल्याड्को ८ स्वर्ण, ४ रजत र ३ कास्य गरी १५ पदक छ । यस्तै ७ स्वर्ण, १० रजत, १० कास्य गरी २७ पदक सहित अष्ट्रेलिया दशौं स्थानमा छ ।
७ स्वर्ण, ३ रजत, ७ कास्य सहित १७ पलकका साथ साउथ कोरिया ११ औं स्थानमा छ । हंगेरिको पनि ७ स्वर्ण, ३ रजत, ४ कास्य गरी १४ पदक छ । स्पेनको ५स्वर्ण, १ रजत र ३ कास्य गरी ९ पदक सहित १३ औं स्थानमा छ । न्युजिल्याण्ड ४ स्वर्ण, ८ रजत र ३ कास्य गरी १५ पदक सहित १४ औं स्थानमा छ । त्यस्तै ब्राजिलको ४ स्वर्ण, ५ रजत र ५ कास्य गरी १५ पदक सहित १५ औं स्थानमा छ । केन्याको ४ स्वर्ण, ४ रजत गरी ८ पदक छ । क्यानडाको ४ स्वर्ण, २ रजत र १० कास्य गरी १६ पदक छ । क्रोएसियाको ४ स्वर्ण २ रजत र गरी ६ पदक छ ।
जमैकाको ४ स्वर्ण, २ कास्य गरी ६ पदक छ । काजकस्तानले ३ स्वर्ण ५ रजत र ७ कास्य गरी १५ अंक सहित २० औं स्थान ओगटेको छ । त्यस्तै क्युवाको ३ स्वर्ण, २ रजत र ४ कास्य गरी ९ अंक छ । अर्जेन्टिनाको ३ स्वर्ण १ रजत, युक्रेनको २ स्वर्ण, ४ रजत र २ कास्य, उत्तर कोरियाको २ स्वर्ण, ३ रजत र २ कास्य पदक छ । पोल्याण्डको २ स्वर्ण, २ रजत र ४ कास्य, बेल्जियमको २ स्वर्ण, २ रजत र २ कास्य छ । थाइल्याण्डको पनि २ स्वर्ण, २ रजत र २ कास्य छ । कोलम्बियाको २ स्वर्ण २ रजत र १ कास्य छ । उजेकिस्तान २ स्वर्ण, १ रजत र ५ कास्य सहित २९ औं स्थानमा छ । ग्रिसले २ स्वर्ण, १ रजत र २ कास्य हात पारेको छ । स्विटजरल्याडको २ स्वर्ण, १ रजत २ कास्य पदक छ ।
इरानको २ स्वर्ण र २ कास्य पदक छ । त्यस्तै डेनमार्क, साउथ अफ्रिका, स्विडने, बेलारुस, अर्मनी, साइबेरिया, स्लोभानिया, इन्डोनेसिया, चेक रिपब्लिक, इथोयोपिया, जर्जिया, रोमानिया, बहराइन, स्लोभाकिया, भियतनामले एक एक वटा स्वर्ण हात पारेका छन् । त्यस्तै चाइनिज तिपेली, इन्डेपेडेन्ट ओलम्पिक एथलेटिक्स, बहमास, फिजी, कोसोभो, पोर्तु रिको, सिंगापुरले पनि एक एक स्वर्ण पदक हात पारेका छन् ।
Previousदिवंगतको सम्झनामा आज ‘गाईजात्रा’ पर्व मनाइदै, उपत्यकामा सार्वजनिक विदा
Nextचिनिया १५ वर्षीया खेलाडी कियानले स्वर्ण पदक जितिन
२० फाल्गुन २०७४, आईतवार ०८:१५
१३ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ०९:२५
पढ्ने उमेरमा, इँटाभट्टामा
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ११:३८